ညဘက်ပြောတဲ့စကား မနက်ကျရင်မေ့ပြီး စိတ်ဖောက်ပြန်သလိုဖြစ်နေတဲ့စွမ်းဇာနည် – Happybox
ညဘက်ပြောတဲ့စကား မနက်ကျရင်မေ့ပြီး စိတ်ဖောက်ပြန်သလိုဖြစ်နေတဲ့စွမ်းဇာနည်
ဇာတ်မင်းသားလေး စွမ်းဇာနည်ဟာ အကကောင်းသလို ဇာတ်မင်းသားထဲမှာလည်း ချောမောတည်ကြည်တဲ့ ရုပ်ရည်ကို ပိုင်ဆိုင်ထားတာကြောင့် “စွမ်း” ဇာတ်သဘင်ဆိုရင် မြန်မာပြည်မှာ နာမည်ကြီးပါတယ်….
ပြီးခဲ့တဲ့ မန္တလေး၊ အမရပူရမြို့နယ် နန်းတော်ရာမှာ ကျင်းပတဲ့ ဇာတ်ပွဲမှာ စွမ်းဇာနည်က စရံငွေယူထားပေမယ့် လာရောက်ဖျော်ဖြေခြင်းမရှိတာကြောင့် ပွဲစီစဉ်သူတွေက ဇာတ်ပစ္စည်း ဇာတ်ကားတွေသိမ်းပြီး ပြဿနာတက်ခဲ့တာကို ပရိသတ်ကြီးတို့လည်း သိမှာပါ…
မင်းသားလေး စွမ်းဇာနည်ဟာလည်း ကျန်းမရေးကြောင့် ဆေးရုံတက်ခဲ့ရပြီး နောက်ပိုင်းမှာတော့ မင်းသားလေးစွမ်းကိုယ်တိုင်သွားရောက်ညှိနှိုင်းခဲ့လို့ ပြေလည်မှုရခဲ့ပေမယ့် “စွမ်း” ဇာတ်သဘင်ကတော့ ဖျက်သိမ်းခဲ့ရပါတယ်….
လတ်တလောမှာတော့ မင်းသားလေး စွမ်းဇာနည်ဟာ သူ့ရဲ့ အာရုံကြောမကောင်းလို့ မေ့တတ်တဲ့ ကျန်းမာရေးအခြေအနေတွေကို အင်တာဗျူးတစ်ခုကနေ ခုလို ပြောပြလာခဲ့ပါတယ်..
((သူဟာ အာရုံကြောမကောင်းတာကြောင့် ဆေးသောက်နေရတာ ၂ နှစ်ရှိပြီဖြစ်ကြောင်း၊ ဆေးမသောက်လျှင် မအိပ်ဘူးလို့ သိရပြီး မအိပ်ခင်ကပြောခဲ့တဲ့ စကားတွေကို အိပ်ရာပြန်နိုးလာတဲ့အခါ မေ့နေတတ်တယ်လို့ စွမ်းဇာနည်က အာရုံကြောမကောင်းတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပြောပြခဲ့ပါတယ်….
အဲလို မေ့တတ်တာကြောင့် မသိရင် လူညာကြီးလိုဖြစ်နေပြီး ပရိသတ်တွေ ပွဲစီစဉ်သူတွေနဲ့ လူကြီးတွေက သူ့ကို အယုံအကြည်မရှိတော့တဲ့အကြောင်း ဝမ်းနည်းစွာနဲ့ ပြောပြခဲ့ပါတယ်…
ဒီရောဂါနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဆေးရုံတက်ရတာ ၅ ကြိမ်ရှိပြီဖြစ်ပြီး တစ်ခါတက်လျှင် တစ်လထိ ကြာတယ်လို့ မင်းသားလေးစွမ်းက ဆက်ပြောပါတယ်…
အသည်းတွေ ကျောက်ကပ်တွေလည်း ထိထားသလို အဓိကမှာ အာရုံကြောမကောင်းတာဖြစ်ပြီး သူသောက်နေရတဲ့ ဆေးကို တခြားလူတွေသောက်ပါက ၂ ရက် ၃ ရက်ထိ အိပ်ပေမယ့် သူကတော့ ဆေးသောက်ရင်တောင် တစ်နေ့မှ ၃ နာရီလောက်ထိပဲ အိပ်တယ်လို့ မင်းသားလေးစွမ်းက ပြောပြခဲ့ပါတယ်…
လက်ရှိအချိန်မှာတော့ မိမိစိတ်ကို မိမိပြန်ပြင်နေပြီး ပွဲနားတယ်ဆိုတာလည်း ရာသက်ပန်မဟုတ်ဘဲ ကျန်းမာရေးအရသာ ဒီတစ်နှစ်နားမှာဖြစ်ပြီး နောက်နှစ် သဘင်ရာသီမှာ ပြန်ကြိုးစားသွားမှာဖြစ်ကာ
စွမ်း သဘင်ဆိုတာကို ပပျောက်မခံပါဘူးလို့ မင်းသားလေးစွမ်းဇာနည်က ဇာတ်သဘင် ဖျက်သိမ်းထားတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ရာသက်ပန်ဖျက်သိမ်းတာ မဟုတ်တဲ့အကြောင်းကို ဆိုခဲ့ပါသေးတယ်….
ဒါ့အပြင် လက်ရှိအချိန်မှာ စွမ်းသဘင်အနေနဲ့ ကပြဖျော်ဖြေရပါက ည ၁၀ နာရီမှ မနက် ၈ နာရီလောက်ထိ လုပ်ရတာကြောင့် ကျန်းမာရေးအရ မလုပ်နိုင်သေးဘဲ ကြားထဲမှာ အချိန်ပိုင်း မိမိတတ်ကျွမ်းတဲ့ ပညာတွေနဲ့ ဇာတ်ပွဲတွေမှာ ဖျော်ဖြေပေးသွားပါ့မယ်လို့လည်း သူ့ကို မျှော်နေတဲ့ ပရိသတ်တွေကို ပြောပြခဲ့ပါတယ်…
စွမ်းဇာတ်သဘင်ရပ်နားထားလို့ မိမိအဖွဲ့သားတွေကိုလည်း သနားတယ်လို့ ဆိုခဲ့ကာ ကျန်းမာရေးကောင်းတဲ့အခါ အလုပ်ပြန်လုပ်ရင်လည်း ပုံမှန် စွမ်းဇာနည်ထက် ၂ ဆ ၃ ဆ ပိုကောင်းတဲ့ စွမ်းဇာနည်ဖြစ်အောင်လုပ်သွားမယ်လို့လည်း ပရိသတ်ကို မင်းသားလေးစွမ်းက ကတိပေးခဲ့ပါတယ်…))
မင်းသားလေးစွမ်းဇာနည်တစ်ယောက် အမြန်ဆုံးပြန်လည်နေကောင်းကျန်းမာလာပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ရပါတယ်…
“အမေ့ဆန္ဒအတိုင်း ရန်ကုန်မှာအိမ်လေးတစ်လုံးဝယ်ပေးတော့မယ့် ဖြူဖြူထွေး”